Nankalaza ny 08 martsa ny vehivavy eto amin’ny Antenimierandoholona – Sénat de Madagascar
Nankalaza ny 08 martsa ny vehivavy eto amin’ny Antenimierandoholona
March 11, 2019 Michel Hervey ANDRIANIRINA
« Fotoana izao mampisandratra ny fiainan’ny vehivavy : ireo mpikatroka eny ambanivohitra sy an-tanan- dehibe » io no lohahevitra nentin’ny vehivavin’ny Antenimierandoholona nankalaza ny andron’ny vehivavy tamin’ity 8 martsa 2019 ity ary teny amin’ny CDA Andohatapenaka (Conseil de Dévéloppement d’Andohatapenaka) no toerana nanamarihana izany.
Amin’ny maha andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy azy moa dia tonga nanotrona ny fotoana ireo Loholona vehivavy , ireo vadin’ny Loholona ary ny mpiasa vehivavy rehetra, izay notarihan-dRamatoa ROBLINE Sekretera jeneralin’ny Andrimpanjakana.
Nasongadin’ny Sekretera Jeneralin’ny Antenimierandoholona tamin’ny anjaram-pitenenany moa ny anjara toeran’ny vehivavy eo anivon’ny fiaraha-monina sy ny Firenena. « Mendrika hajaina ny vehivavy, manan-jo handova. Ny zon’ny vehivavy dia mitaky adidy sy andraikitra eo anatrehan’ny fiaraha-monina ary ny fafehezana izany no ahafahany mampandroso ny Firenena ». Amin’ny anaran’ny vehivavy rehetra eo anivon’ny Andrimpanjakana moa dia nakasitraka tanteraka ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO ny tenany nanampy tamin’ny fanatontosana ity hetsika ity.
Teo amin’ny fandraisam-pitenenan-dRamatoa RAZARIVELO Jacqueline mpanolotsaina eo amin’ny fitantana ity toerana ity no nitantarany fohifohy ny mahakasika ny CDA. «Mitodika tanteraka amin’ny fanasoavana sy ny fampandrosoana ny faritra Andohatapenaka iray manontolo ny andraikitrin’ny CDA , ary fivondronan’ireo vehivavy miady irery amin’ny fiainana sy sahirana ary be antitra. Tanjon’ny CDA ny andraisan’ny vehivavy tsirairay avy andraikitra eo anivon’ny fiaraha–monina mba tsy hiraviravy tanana intsony ». Nambarany ihany koa fa zava–dehibe tamin’izy ireo ny fahatongavan’ny vehivavin’ny Antenimierandoholona teny an-toerana, satria sambany no mba nisy Andrimpanjakana tonga nitsidika ity toerana ity.
Nampiavaka ny fankalazana ity fotoana ity moa ny famelabelaran-kevitra mikasika ny vehivavy sy ny zony izay nataon’dRamatoa RASAMOELINA Brigitte mpampakateny faharoa eto anivon’ny Antenimierandoholona ka isan’izany ny zo sy ny andraikitrin’ ny vehivavy eo amin’ny tontolo misy azy ; ny fanomezana ny zom-pirenena Malagasy ho an’ny zanany vao teraka ; ny fanovana ny kitay telo andalana ho lasa zara mira ankehitriny ; ny fanambadiana aloha loatra ho an’ny vehivavy izay 14 taona teo aloha ka lasa 18 taona ankehitriny ary ny zon’ny vehivavy amin’ny sehatry ny asa.
Ankoatra ny famelabelaran-kevitra dia nisy koa ny fizarana vary , menaka , savony ary akanjo ho an’ireo vehivavy mananon-tena sy be antitra nandritra io fotoana io.